Shirkii Garoowe uga socday Farmaajo iyo Hoggaamiyaasha Maamul goboleedyada oo Fashilmay.
Saturday May 11, 2019 - 11:53:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa fashil iyo guuldarro kusoo idlaaday shir magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal uga socday hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ayaa sheegaya in hoggaanka dowladda Federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku fashilmeen in ay gaaraan heshiis si khilaafka loo xalliyo.
Shirar aan loo kala kicin oo Garoowe ka socday lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ayay dhinacyadu isku fahmi waayeen, Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ah madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay in uu fashilmay shirkii Garoowe ka socday.
Axmed Madoobe oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Jubbaland ayaa isna dib ugu laabtay magaalada Kismaayo waxaana lafilayaa in Farmaajo iyo Kheyre ay dib ugusoo laabtaan magaalada Muqdisho.
Arrimaha dhinacyadu isku khilaafeen waxaa kamid ah qaban qaabinta doorashooyinka,xal ka gaaridda khilaafka maamulka Galmudug.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maamullada Puntland iyo Jubbaland ay diideen ajandayaal ay soo gudbiyeen Farmaajo iyo Kheyre kuwaas oo maamul goboleedyada udiidayay in ay xiriiro lasameystaan dibadda ama ay lamacaamilaan hay'adaha UN-ka iyagoo aan fasax ka heysan dowladda Federaalka.
Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa lafilayaa in shir dib uheshiisiineed dibadda ugu qabato hoggaamiyaasha maamullada iyo madaxda dowladda Federaalka, arrintan ayaa dib udhac weyn ku ah dowladda Farmaajo oo tan iyo markii ay maamulka lawareegtay sanaddii 2017 wajaheysay mucaaradad dhan walba ah.
Maamulka 'Puntland' oo si yaab leh usafaxay maandooriyaha Khaatka.
Maamulka 'Puntland' oo xaqiijiyay in weerar khasaara dhaliyay ciidamadiisa lagula beegsaday Balli Khadar.
Ciidamada Itoobiya oo gaari gaashaaman Jiirsiiyay Maleeshiyaad katirsan maamulka Axmed Madoobe.
Wasiirro katirsan maamulka 'Puntland' oo laga helay cudurka Carona.